उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका ६ उपाय आज : २०७४ असार १२ सोमबार / 26th June, 2017
मुख्य समाचारसमाचारनर्सिङविचार/ब्लगडक्टर्स आर्टिकलअन्तर्वार्ताटिप्स/जानकारीभान्सामै औषधीजीवनशैली	Toggle navigation
मुख्य समाचारसमाचारनर्सिङविचार/ब्लगडक्टर्स आर्टिकलअन्तर्वार्ताटिप्स/जानकारीभान्सामै औषधीजीवनशैली	English
डा. प्रकाशराज रेग्मी, बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ
२०७४ जेठ ३ बुधबार ०८:५०:००
प्रकाशित ९७२१ पटक पढिएको
उच्च रक्तचाप मानसिक तनावग्रस्त आधुनिक जीवनशैलीको परिणाम हो । अति व्यस्त जीवन, उच्च आकांक्षा, असन्तोष, अत्यधिक कार्यबोझ आदिले रक्तचाप बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । आजको युगमा काम नगर्ने, उच्च आकांक्षा नराख्ने व्यक्ति विकासको गतिमा पछाडि पर्छ । अगाडि बढ्ने होडबाजीले रक्तचाप पनि माथि पु¥याउँछ । यसको मतलब रक्तचाप नियन्त्रण गर्न विकासको गीतमा रोक लगाएर जोगी नै बनेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजेको अवश्य होइन । तर रक्तचाप बढ्ने रोग लागेका व्यक्तिले यस प्रकारको व्यस्त जीवन शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ ।
निश्चित दिनचर्याअनुसार काम गर्ने, बढी कार्यबोझ नलिने, विवादास्पद काममा हात नहाल्ने, अफिसको काम घरमा कहिल्यै पनि नल्याउने, महत्वाकांक्षी नबन्ने, काममा फलको आशा बढी नगर्ने, असफलतालाई सजिलैसँग स्वीकारी हतोत्साहित नहुने, छुट्टीको दिनमा मिटिङ तथा अफिसका काम छाडेर श्रीमती÷श्रीमान् र बालबच्चालाई पनि समय दिने, उनीहरुसँग छुट्टीको समयमा घुम्न जाने, प्रत्येक वर्ष एक पल्ट दुई–तीन हप्ताको छुट्टी मिलाई विश्राम र मनोरञ्जन गर्ने बानी बसाल्ने गर्नुपर्छ । यस प्रकार जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आफूले प्रयास गरे असम्भव छैन ।
मन र मस्तिष्क शान्त पार्न सके उच्च रक्तचाप पनि कम भएर जान्छ । योग अभ्यासको माध्यमबाट मन र मस्तिष्क शान्त पार्न सकिन्छ । स्वास्थ्य भनेकै शरीर र मस्तिष्कबीचको शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । उच्च रक्तचापले यस्तो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई खलबल पार्छ । यो खलबलीलाई ठिक पार्ने तन्त्रयोगका चार खुड्किलामध्ये प्रथम खुट्किलो हठयोग (आसन) हो भने अन्तिम अर्थात् चौथो खुट्किलो राजयोग हो । ध्यानको एक माध्यम हो राजयोग । राजयोग उच्च रक्तचाप घटाउने अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो । यस प्रकार तन्त्रयोगले हठयोग र राजयोगजस्ता वैज्ञानिक उपायद्वारा शरीर र मस्तिष्कलाई शान्त बनाइ उच्च रक्तचाप तथा मुटुका अन्य रोगको उपचारमा सहयोग पु¥याउँछ । यसले मुटुको रक्षाका लागि दुवै प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक महत्व राख्छ ।
व्यायामले रक्तचाप घटाउन मद्दत पु¥याउँछ । हिँड्ने, विस्तारै कुद्ने, पौडी खेल्ने, साइकल चलाउने आदि जस्ता व्यायामले रक्तचाप नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्छन् । यी व्यायामहरु नियमित गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सबैभन्दा सजिलो र प्रभावशाली व्यायाम नियमित रुपमा दैनिक एक घन्टा कम्तीमा चार किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले हिँड्नु हो । हिँड्दा शरीरलाई असजिलो हुनु हुँदैन । छाती दुख्ने, दम फुल्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरी व्यायाम गर्नु हुँदैन । विस्तारै सुरु गरेर पछि रफ्तार बढाउँदै जानुपर्छ ।
उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरुले दैनिक खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । खानामा नुन, चिनी, घिउ, तेलको मात्रा कम हुनु जरुरी छ । उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई मधुमेह, युरिक एसिड, उच्च रक्तकोलेस्ट्रोल पनि हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यी रोगको नियन्त्रणका लागि पनि खानपिनमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । मुटु र आहारबारे पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
अहिले प्रचलनमा क्यान्सर
झाडापखाला गराउने हैँजाजस्तै अज्ञात ब्याक्टेरिया?
नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ताले गरे जडीबुटी व्यवसायी अपहरण, चार जना पक्राउ
चार दिनदेखि छट्पटाइरहेकी गर्भवतीको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार
योग्यता Vs पैसाः कसले पाउला विज्ञ डाक्टर अध्ययनमा भर्ना? (दुवै तर्फको नामावली)
गर्मीमा फैलिने हेपाटाइटिस-ए के हो? कसरी बच्ने?
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने
पिजीमा मेरिट लिस्ट अनुसार भर्ना नलिए आन्दोलन
श्रीलङ्काली डाक्टरको हडताल अन्त्य
Experiencing World Health Assembly
बिरामीको मृत्युपछि अस्पतालमा तोडफोड, डाक्टर-नर्समाथि पनि हातपात
डिप्रेसनका १२ लक्षण र रोकथामका ८ उपाय
डा. किरण रेग्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त
जब राष्ट्रकविले छोरी स्वास्थ्य सचिव भएको पत्र हेरे, आँखा आँशुले भरिए
तीन डाक्टर १२औं तहमा बढुवा ८.
डा. रेग्मीले स्वास्थ्य सचिवको पदभार सम्हालिन्
पशुपती अस्पताल इटहरीका सञ्चालक चौधरी र डा. शाह पक्राउ
आकासमै जन्मियो बच्चा, बच्चाले जीवनभर निःशुल्क प्लेनमा उड्न पाउने
पढ्नै पर्ने किन गर्ने बिरामी नपर्दै ‘होल बडी चेकअप’ ? आङ खस्नुका १४ कारण र ९ लक्षण थाइराइड परीक्षण गर्न जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा ६० वर्ष कटेपछि गर्नुपर्ने ९ जाँच गगनको बिदाइः श्रीमतीको आँशुदेखि सचिवको ठट्टासम्म छिटो-छिटो पिसाब लाग्नु प्रोस्टेटको समस्या हुन सक्छ, यस्ता छन् लक्षण र उपचार हाई ब्लडप्रेसर बारे १८ भ्रम र सत्य विदेश गएका कामदारको अकाल मृत्यु र रोगका कारण खोज्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय औषधिमा अचाक्ली मूल्य असुल्दै आएका आयातकर्ताहरु नै धर्नामा धूमपान गरेको १० सेकेन्डमा मस्तिष्कबाट यसरी सुरु हुन्छ असर हेल्प पब्लिकेशन प्रा लि